Ahoana no hanafoanana ny fisoratana anarana Disney Plus? - Fialam-Boly
Disney Plus dia sehatra streaming izay nanjary iray amin'ireo serivisy mivantana mivantana mpamatsy. Manana a fanangonana horonantsary sy andiana fahitalavitra goavambe izay mety tianao hijerena. Fa raha mahatsapa ianao fa tsy ny fanompoana no tadiavinao dia azonao atao ny manafoana azy amin'ny fotoana rehetra. Mba hisorohana ny sarany tsy ilaina dia mila manafoana azy ianao alohan'ny ivoahan'ny daty faktiora.
Azonao atao ny manafoana ny maha-mpikambana anao amin'ny alàlan'ny tranokalanao. Ny fisoratana anarana Disney Plus anao dia haharitra mandra-pahatapitry ny daty faktioranao ankehitriny izay midika fa mbola afaka mijery izay efa naloanao ianao na dia efa nanafoanana ny fisoratana anarana aza ianao.
Raha ny mahazatra, ny famandrihana ho an'ny Disney Plus amin'izao fotoana izao dia manodidina ny $ 6.99 isam-bolana na eo amin'ny $ 69,99 mandritra ny taona. Ny azonao atao dia azonao atao ny manandrana alohan'ny tena ividiananao ny mpikambana miaraka a fitsarana 7 andro maimaim-poana fe-potoana. Amin'izany dia azonao atao ny mijery amin'ny andrana raha ny serivisy no tadiavinao ary raha mifanaraka amin'ny marika izany. Ataovy ao an-tsainao fa raha mikasa ny hanafoana ny fisoratana anarana ianao dia mila manafoana fotsiny ny maha-mpikambana anao mandritra ny fotoam-pitsarana dia tsy ho voaloa ianao amin'ny famandrihana.
Na izany aza, raha manafoana ny famandrihana ianao rehefa tapitra ny vanim-potoana fitsapana, dia hitohy ny fisoratanao mandra-pahatongan'ny datin'ny faktiora manaraka izay midika fa hiasa hatramin'ny faran'ny volana izy raha misafidy ny drafitra isam-bolana ary mety fa hatramin'ny faran'ny taona raha nisafidy ny safidy isan-taona ianao. Amin'ireo tranga roa ireo dia handoa vola $ 6.99 ianao mandritra ny iray volana na $ 69.99 mandritra ny taona iray miankina amin'ny drafitra nofidinao.
Midira ho an'ny fihenan'ny mpianatra Disney Plus
Ahoana ny fomba ahazoana IPTV maimaim-poana?
Ahoana no ahafahanao manafoana ny fisoratana anarana Disney Plus anao?
Tsidiho ny tranokala ofisialy ary kitiho ny kaonty eo ambanin'ny Profile.
Rehefa tonga any ianao dia tsy maintsy tsindrio ny antsipirian'ny faktiora. Avy eo, ho hitanao ny safidy hanafoanana ny fisoratana anarana.
Hanana safidy Cancellation tanteraka ianao eo amin'ny efijery izay mampiseho anao koa ny andro azonao mandra-pahatapitry ny fividianana faktiora ankehitriny. Ary vita eo ianao. Ny efijery iray hafa dia hanontany ny antony nanapahanao hevitra hanafoana ny fisoratana anarana.
Dia izay. Vita ianao. Ianao koa dia hahazo mailaka manamarina ny fanafoanana. Raha manapa-kevitra ny hanova ny eritreritrao ianao dia kitiho ny bokotra Restart Subscription ao amin'ny mailaka hanohizana ny famandrihana indray.
Ahoana no ahafahanao manafoana ny fitsarana maimaimpoana anao Disney Plus?
Ny dingana dia mitovy. Raha hanafoana izany ianao alohan'ny daty faktiora voalohany dia hankafy ny fitsaranao ianao nefa tsy ampandoavina denaria iray akory. Handray hafatra momba an'io ianao rehefa mangataka aminao voalohany izy ireo hampiditra ny antsipirian'ny carte de crédit anao amin'ny alàlan'ny Disney Plus.
Fikirana hanafoanana ny famandrihana Disney Plus ao amin'ny fikirakira iPhone:
Raha nisoratra anarana amin'ny famandrihana Disney Plus ianao tamin'ny alàlan'ny iPhone na fitaovana Apple hafa. Amin'izay dia tsy mila mampiasa fitaovana Apple ianao raha te hanafoana ny fisoratana anarana. Saingy, mora be izany. Azonao atao ny manaraka ireto dingana ireto mba hanafoanana ny famandrihana Disney Plus amin'ny alàlan'ny iPhone na Apple Device hafa.
Sokafy ny fampiharana Setting amin'ny fitaovanao.
Tsindrio ny anaranao eo ambony.
Safidio ny famandrihana avy eo.
Tsindrio Disney Plus.
Avy eo, kitiho ny Cancel Subscription.
Fanamarihana: Mora kokoa ny manafoana ny famandrihana Disney Plus avy amin'ny tranonkala iray.
Ahoana ny fanafoanana ny famandrihana Disney Plus ao amin'ny Google Play Store amin'ny findainao Android?
Raha nisoratra anarana tamin'ny Disney Plus tamin'ny alàlan'ny Google Play na fitaovana Android ianao, dia tsotra ny fanafoanana ny famandrihana.
Voalohany, mila manokatra ny rindranasa Google Play Store amin'ny fitaovanao Android ianao.
Kitiho ny Menu ary safidio ny famandrihana avy eo.
Safidio Disney Plus.
Tsindrio ny hanafoanana famandrihana.
Ny fanafoanana ny kaonty Disney Plus anao dia mahitsy raha mbola fantatrao fa mila manafoana azy amin'ny fampiasana karazana fitaovana nampiasanao mba hisoratra anarana mitovy amin'izany ianao. Amin'izany dia midika izany fa raha nisoratra anarana tamin'ny Disney Plus ianao tamin'ny fampiasana browser Internet na amin'ny PC-nao na amin'ny laptop-nao dia mila miditra amin'ny fitaovana mitovy amin'izany ianao hanafoanana ny fisoratana anarana Disney Plus anao.
Raha vao nofoanana ny fisoratana anarana dia mbola afaka miditra ihany ianao mandra-pahatonganao any amin'ny faran'ny tsingerin'ny faktiora. Ka raha mikasa ny hanafoana ny fisoratana anarana ianao dia azonao atao ny mahazo antoka fa afaka aorian'ny cycle, ka mbola manana iray volana ianao hijerena. Ary raha miova hevitra ianao ary te hanomboka indray dia afaka misoratra anarana indray foana any aoriana any mba hijery andiany tsy misy farany.
350+ anarana vondrona WhatsApp (Mampihomehy, Mahafinaritra ary Miavaka)
Netflix vs Disney Plus - Iza amin'ireo serivisy mivantana no tsara indrindra?
kaonty sy tenimiafina volamena mivantana xbox maimaimpoana
inona no atao hoe anime amin'ny hulu
maimaim-poana amin'ny sarimihetsika teatra an-tserasera
mivantana mivantana fanatanjahantena an-tserasera
tranonkala iray hijerena sarimihetsika maimaim-poana